China High term term microcomputer thermostat STC-300 fanamboarana sy orinasa | Sanhe
Termostat microcomputer avo lenta STC-300
Fivarotana mafana ny teknolojia vaovao elektronika mari-pana co ...
Fivarotana hafanana mangatsiaka mivarotra EK-3020
Thermometer nomerika nomerika avo lenta sy marina WT-1
Fitaovana niomerika frigeration TPM-10 profesion ...
Mpamatsy BBQ Food Digital Thermometer TP101
Famatsiana thermometer elektronika biby fiompy anaty rano SD-1
220V indostrialy elektronika thermometer JDP-200 ho an'ny ...
Ity vokatra ity dia fanaraha-maso maripana tokana manerantany, misy ny fiasan'ny vata fampangatsiahana, fanairana tafahoatra, sns;
Ny fotoana fanemorana ny fiarovana ny compressor dia afaka manitsy;
Aorian'ny fanamafisana ny mari-pana amin'ny alàlan'ny hafanana dia azo ovaina;
Mety amin'ny fitahirizana mangatsiaka, indostrian'ny vata fampangatsiahana vata fampangatsiahana, sns.
Tolotra natolotra: LOGO namboarina, labozia, boaty fonosana namboarina, vokatra namboarina, sns
Fandefasana: serivisy fitaterana an-dranomasina, rivotra, express, varavarana.
Fanaterana haingana: 7-10 andro hitahirizana. 10-20 andro tsy misy tahiry.
Santionany: azo omena ny santionany ary halefa afaka 7 andro eo ho eo.
Serivisy OEM / 0DM: nanaiky
Fe-potoana fandoavana: 30% petra-bola, 70% fandoavana farany amin'ny fandefasana
Fomba fandoavam-bola: fandoavam-bola amin'ny banky, fandoavam-bola, Western Union ary fomba fandoavam-bola hafa, afaka mandoa RMB ihany koa ianao
Ny orinasanay dia manampahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana sy fivarotana ny mpanara-maso ny mari-pana microcomputer ary ny mpanara-maso ny hamandoana. Ny puce ampiasaina amin'ny mpanara-maso ny mari-pana dia manana fahombiazana maharitra, asa feno, fiarovana maro, famolavolana drafitra mandroso sy antonony ary fanodinana dingana ary ny haavo teknika dia mandroso eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mitarika eo an-toerana. Ity vokatra ity dia manana rindrambaiko maro isan-karazany eo amin'ny sehatra sy indostrian'ny fihenan-tsakafo sy ny fampangatsiahana ary ny fikojakojana ny frizera. Ny orinasanay koa afaka mamolavola sy manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Fomba sy fiasa
Haben'ny vokatra: 75 * 34.5 * 85mm
Fametrahana habe: 71 * 29mm
Sensor: 2 metatra (tafiditra ao anaty fanadihadiana)
Famatsiana herinaratra: 220VAC ± 10%, 50 / 60Hz
Fanjifana herinaratra: ≤3W
Halavan'ny fandrefesana ny maripana: -50 ℃ ~ 120 ℃
Fanapahan-kevitra: 0,1 ℃
Rariny: ± 1 ℃
Fampitana fampitaovana: 10A / 220VAC
Sahan'asa: 0 ℃ ～ 60
Ny hamandoana mifandraika: tsy mihoatra ny 80% (Tsy misy fanalefahana)
◆ Ampidiro ny maody fametrahana ny masontsivana an'ny mpampiasa
Amin'ny fanjakan'ny tsy fametrahana azy dia tsindrio ny bokotra "SET" mandritra ny 5 segondra hidirana amin'ny mode setting ho an'ny mpampiasa, apetraka hatrany ny jiro famantarana amin'izao fotoana izao, ny fantsona nomerika dia mampiseho ny sandan'ny mari-pana napetraka ankehitriny.
Eo ambanin'ny fipetrahan'ny mpampiasa dia tsindrio ▲ na tsindrio isaky ny miakatra na mampihena 1 ℃ ny sanda fametrahana ny mari-pana.
◆ Miala amin'ny maody fametrahana ny mpampiasa
Eo ambanin'ny fipetrahan'ny mpampiasa dia tsindrio ny bokotra "SET" mandritra ny 5 segondra na tsy misy fiasa lehibe ao anatin'ny 30 segondra, ny rafitra dia hamonjy ny sanda fametrahana ankehitriny miverina amin'ny fanjakana miasa mahazatra.
◆ Midira ao amin'ny menio mpandrindra
Amin'ny fanjakan'ny tsy fametrahana dia tsindrio ny bokotra keys sy SET mandritra ny 10 segondra mba hidiranao ao amin'ny fipetrahan'ny menio mpandrindra ,, Ampidiro ny jiro famantarana amin'izao fotoana izao, ny fantsona nomerika dia mampiseho ny singa F0.
◆ Fanitsiana ireo singa napetraka sy fidirana ao anaty fari-pitantanana fari-pitantanana
Eo ambanin'ny fipetrahan'ny toe-javatra, kitiho ny ▲ na Vkey hanitsy na hidina hanitsy ny toe-javatra F0 ~ F6. Rehefa manova sanda parameter, tsindrio ▲ na Wkey hanamboarana ny toerany, tsindrio SETkey raha hiditra amin'ny fanovana fanjakana, ny fantsona nomerika dia mampiseho ny ankehitriny fametrahana sanda an'ity masontsivana ity.
◆ Ny fanovana ny parameter ary miverina amin'ny fametrahana ny maody entana Eo ambanin'ny maody fametrahana ny parameter, tsindrio ▲ na Vkey hanitsy na hidina hanitsy ny sanda fampiasa, tsindrio ny bokotra SET mba hamerenana ireo fomba fanovana ireo singa napetraka aorian'ny fametrahana ny fatra, ny fantsona niomerika dia mampiseho ny entana napetraka ankehitriny . ◆ Famonjana sy fivoahan'ny parameter
Teo aloha: Fivarotana mafana tekinika elektronika vaovao mifehy STC-200
Manaraka: Namboarina ho an'ny vata fampangatsiahana 220v STC-1000
mpanara-maso ny mari-pana aquarium
mari-pana momba ny mari-pana
mari-pahaizana momba ny mari-pana amin'ny sensor
Thermome niomerika sakafo avo lenta sy marina ...
Hevitra vaovao famolavolana masoandro nomerika thermometer DS ...
Thermometer elektronika amin'ny fandrefesana barbecue t ...
Ny refin'ny hafanana indostrialy sy ny hamandoana ...
Fivarotana mafana tekinika vaovao elektronika temperatu ...
Thermometer sy hygrométer anatiny tsy misy senso ...
thermometer nomerika, nomerika nomerika mpanara-maso, fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, thermometer nomerika Aquarium, fanaraha-maso ny mari-pana incubator, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana,